Somaliland oo ka Diyaar-garowday Dagaalada ka Socda Buuraleyda Gal-galla | BuhodlePost.com
Somaliland oo ka Diyaar-garowday Dagaalada ka Socda Buuraleyda Gal-galla
Hargaysa (Bpost)-Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa ka hadashay saamaynta ka soo gaadhi karta iyo waxa uga qorshaysan haddii ay dhulka Somaliland ku soo fidaan dagaalada ka socda buuraleyda Gal-galla ee gobolka bari ee u dhexeeya maamul goboleedka Puntland iyo kooxda Al- Shabaab.
Maadaama oo buuraleyda Gal-galla ee ay ku dagaalamaan Puntland iyo Al-shabaab u dhawdahay, isla markaana ay xuduud wadaagaan gobolka Badhan ee Somaliland iyo gobolka Barri oo Puntland maamusho.
Wasiirka gaashaandhiga Somaliland Axmed Xaaji Cali (Cadami), ayaa caddeeyay in ay dagaallada buuraleyda Gal-galla isha ku yahaan, isla markaana ay Somaliland diyaar u tahay in ay ka difaacato in Al-Shabaab ay u soo firxadaan dhulkeedda.
Waxaanu sheegay wasiirku in shacbiga degaamadda gobolka Badhan iyo ciidamadda qaranka Somaliland oo is-kaashanayaa ay meel uga soo wada jeedaan sidii la isaga qaban lahaa in dagaaladu ku soo fidaan dhinaca Somaliland.
“Somaliland diyaar ayay u tahay, horena dad fara badan ayaa kaga dhintay, imikana waxay diyaar u tahay intii suurtogal ah in dhulka ay jiraana si fiican loo sahamiyo, lagu sii dhawaado.
Wax alla wixii shacbiga meesha degan iyo ummada kale ee wanaaga jeceliba, haddii uu Puntland ka yimid iyo haddii uu meel kale ka yimid-ba, in meel looga soo wada jeedsado ayaanu diyaar u nahay” ayuu yidhi wasiirka gaashaandhiga Somaliland oo shalay xafiiskiisa ugu waramayay bulsho TV.
Mar la waydiiyay wasiirka su’aal ahayd in haddii ay al-shabaab kaga awood badato Puntland dagaalka, in Somaliland ay gurmad ciidan u fidinayso Puntland iyo in kale, waxa uu yidhi “Haddii ay ka awood badato, oo aanu arkayno in ay Shabaab tahay, anagu (Somaliland) dad kale oo Soomaali ah in aan iska layno diyaar uma nihine. Haddii aanu hubino oo aanu xaqiijino in qoladan (Shabaab) hada caanka noqotay ay yihiin, waajib ayay nagu tahay in aan u gurmanno.”